ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသလေးများ | အိမ့်မှူးသော်
ကဲဒီတခါတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသ စာသားလေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
How old are You ? (မင်းဘယ်လို အိုသွားတာလဲဟင် ။)
Quite Well ...!(တော်တော်လေးကောင်းသောရေတွင်း ။)
Where does you live ? (မင်းဘယ်မှာ live (show) လုပ်မှာလဲ ။ )
Quite Right ! (တော်တော်လေးကောင်းသော ညာဘက် ။)
Turn right !(အမှန်ကို လှည့်ပါ ၊။)
Turn left (လှည့်ပီးထားခဲ့ သည် )
Bye the way (လမ်းမကြီး အားဖြင့် )
Hand round ( လက်ကိုလှည့်ပါ )
Next door (နောက်တံခါးတစ်ချပ် )
How's going ? (ဘယ်လိုသွားမျာလဲ )
How long have you been in Singapore ? (မင်း စင်္ကာပူမှာ ဘယ်လို ရှည်လာတာလဲ ။)
Get into bed (အိပ်ယာထဲတွင်ရသည် )
Getting out (အပြင်တွင်ရသည် )
Getting in (အထဲတွင်ရသည် )
Dressing table (၀တ်စုံပြည့် စားပွဲ )
All right (အားလုံးညာဘက် )
Make up your mind (မင်းစိတ်ကို မိတ်ကပ် လိမ်းလိုက်ပါ )
Try on ( အပေါ်တွင်ကြိုးစားပါ )
Put on ( အပေါ်တွင်ထားပါ )
Keep an eye (မျက်လုံးတစ်လုံး သ်ိမ်းထားပါ )
Long gone (အရှည်ကြီး သေသွားပြီ )
Go out with date (နေ့ စွဲနဲ့ အပြင်ထွက်သည် )
Well done (ေ၇တွင်းပီးပီ)
Everything should be all right (အားလုံးညာဘက်ဖြစ်သွားမှာပါ )
I am not felling well (ငါရေတွင်းကိုခံစားလို့ မရတော့ဘူး )
Hurry up (အပေါ်က မြန်မြန်လုပ် )
Poor you (မင်းက ဆင်း၇ဲလိုက်တာ )
Poor down (အောက်ကဆွဲပါ )
back off (နောက်ဖက်ကို ပိတ်ပါ )
Anyway (မည်သည့်လမ်းမဆို )